Vision and Mission » Technological University (Dawei)
အစဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသော အာဆီယံ အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်လာစေရန်။
• To develop outcome-based education and quality management system.
• To upgrade the competency of learners, faculty and quality of infrastructure.
• To educate students professionally and ethically to deal with technical challenges of society and develop their innovative ideas.
ကျွန်ုပ်တို့၏ခံယူချက် (Our Mission)
• အရည်အသွေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် တိုးတက်လာစေရန်နှင့် ရလဒ်များကို အခြေခံ သော ပညာရေးစနစ်အဖြစ် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်။
• ဆရာ/ဆရာမများ၊ကျောင်းသား/သူများနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ အရည်အသွေး များ၊ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်။
• တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဆိုင်ရာ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်နှင့်လူမှုအဖွဲ့အစည်းရှိ နည်းပညာဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ကျင့်ဝတ်နှင့်ကိုက်ညီသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ကျောင်းသား/သူများ အဖြစ် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန်။
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်) ၏ ဆောင်ပုဒ် (Motto)
“ တီထွင်ဖန်တီး အနာဂတ် လူ့အဖွဲ့အစည်း ”